ဘင်္ဂါလီ ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်း နိုင်ငံတကာသံတမန်အဖွဲ့ သွားရောက် လေ့လာ
ညီမျှခြင်းမြန်မာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး နည်းပြသင်တန်း စတင်ကျင်းပပြုလုပ်
Amnesty အဖွဲ့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ
လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ ဦးခိုင်မျိုးထွန်း လွတ်မြောက်
မြန်မာတပ်ချုပ်ကို ICC တင်ဖို့ ဗြိတိန်အမတ် ၁၀၀ ကျော် စာရေးတောင်းဆို
ပါပွီးထံမှ သင်ယူခြင်းဇတ်လမ်းတွဲ၏ “ဒေါသစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း” စတုတ္ထအပိုင်း
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးကို ကနေဒါ ဒဏ်ခတ်အရေးယူ
UPR နှစ်လည်အစီရင်ခံစာ ပြင်ဆင်ရေးသားရန်အတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပ
ရခိုင်ပဋိပက္ခ၊ လုံခြုံရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေး (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း)
လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ အပိုင်း(၁၁၁) ပါပွီးထံမှသင်ယူခြင်း အနိုင်ကျင့်မှုကိုတုန်ပြန်ခြင်း (တတိယပိုင်း)
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီအင်္ဂါနေ့ ဆွေးနွေးမည်
HR ပညာပေး ရုပ်သံ
You are at:Home»HR သတင်း»ဘင်္ဂါလီ ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်း နိုင်ငံတကာသံတမန်အဖွဲ့ သွားရောက် လေ့လာ
By Equality Myanmar on	 February 8, 2018 HR သတင်း
ပြည်ထောင်စုအစိုးအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း ဦးဆောင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့က သံအမတ်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတကာသံ အဖွဲ့ဟာ မနေ့က ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ မောင်တောမြို့ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လှဖိုးခေါင်ကျေးရွာကို သွားရောက်လေ့လာကြရာ တဆောင်မှာ ၆ ဦး နေထိုင်နိုင်တဲ့ ၈ ခန်းတွဲ အဆောက်အအုံ ၁၅၉ လုံး အခြေအနေ၊ ယာယီတဲတွေ အပါအဝင် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်နေတဲ့ အနေအထားအရ လူဦးရေ ၈၀၀၀ လောက် နေထိုင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ လျှပ်စစ်မီး ရရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကို တာဝန်ရှိသူတဦးက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ငါးခူရ၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲ နေရာတွေကို ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ ထွက်ခွာသွားကြပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတားနဲ့ ပြန်လည်လက်ခံရေး စင်တာတွေ အဆင်သင့် ပြီးစီးနေမှုတွေကို လေ့လာကြပြီး နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးအနီး ကွင်းပြင်မှာ ယာယီတဲတွေ ဆောက်လုပ် နေထိုင်နေကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ညနေပိုင်းမှာ မောင်တောမြို့ ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်ပြီးစီးတဲ့ အခြေအနေတွေကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။
သတင်း – အောင်ကျော်မင်း(မောင်တော)
ညီမျှခြင်းမြန်မာ Facebook လူမှုကွန်ရက်
“Equality Myanmar has launched its 2018 Training for Trainers (TOT) Training”
Equality Myanmar has started its annual program of Training for Trainers (TOT) training program on February 22nd, 2018.
At the opening ceremony of this training, Equality Myanmar Executive Director, U Aung Myo Min, gave his opening speech which stated “He is proud of each and everyone who have joined this human rights training program and welcome them as part of the family members who are striving for the human rights. Furthermore, there are people who had drawn different kind of definition to human rights in this generations as well as misconception on the human rights are at its verge so after attending this human rights training the participants should deliver the human rights knowledge with its core truth and one should raise the good innate to becomeahuman rights trainer”
After that, the parliamentary representatives from the Mandalay Division Aung Myay Tharzan township, U Khun Kyaw Oo said “ In our country, we have lost in human rights forasignificant number of years. Previously, we can’t openly talked about the human rights but now things have changed we can openly discussed about it in public. And I feel really glad to have these kinds of human rights training”.
He added by saying that he welcomed the commencement of the human rights training and human rights and its responsibilities are balancing and it is not only about the opportunities but have to respect the responsibilities are some of the important facts.
“Instead of feeling proud to be selected to attend the training, we need to think that what we can change or even helped in our environment after attending this training. And I hope that at the end of this training, there will beagroup of people who are sailing in the same boat towards for the better human rights for our country, our nation and community” are some of the encouraging words said by Ma Su Chit, one of the TOT graduated trainer from 2013.
Moreover, Senior Advocacy trainer from Equality Myanmar, U Aung Zaw Htwe, would like to urge the participants to give their 100% in understanding the human rights and to becomeaperson who will stand for the public and communities and to develop the moral and spirit to work for our people .
After ending this opening ceremony of the training, participants and trainers discussed about the training module. There are (27) participants who have been selected out of (100) applicants who have applied for this training. The training is going to be commenced from the period starting from 22nd of February,2018 to 23rd of March, 2018 in Mandalay, Shwe Phyu Hotel. ... See MoreSee Less
“ညီမျှခြင်းမြန်မာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး နည်းပြသင်တန်း စတင်ကျင်းပပြုလုပ်”
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ညီမျှခြင်းမြန်မာ အဖွဲ့ မှ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိသော လူ့အခွင့်အရေးနည်းပြသင်တန်းကို စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်းမှ "၎င်းအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ လူ့အခွင့်အရေး နည်းပြသင်တန်းတတ်ရောက်လာသူများအတွက် ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း၊ လူ့အခွင့် အရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်မည့် မိသားစုဝင်များဖြစ် ကြိုဆိုပါကြောင်းများပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ယနေ့ခေတ်အခြေအနေအရ လူ့အခွင့်အရေးအား လိုရာဆွဲ၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသူများရှိကြ ကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ်တွင် အထင် အမြင်လွဲမှားမှုများရှိနေကြာင်း၊ ထို့အတွက်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လူ့အခွင့်အရေးနည်းပြသင်တန်းဆင်းပြီးသည့်အခါတွင် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းအရာများအား မှန်မှန် ကန်ကန်ပြောဆိုနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လူ့အခွင့် အရေးနည်းပြတစ်ဦးအနေနှင့် စိတ်ရင်း စေတနာ ကောင်း များလည်း မွေးမြူစေလိုကြောင်း" အဖွင့်အမှာစကားပေးပို့ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ကျော်ဦးမှလည်း “ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့် အရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကာလဟာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်လာပြီရင် သိုသိုသိပ်သိပ် ပြောဆိုနေခဲ့ရာကနေအခုတော့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို ပွင့်လင်း စွာပြောဆိုလာ နိုင်ခဲ့ ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းတွေ ပေးလာတဲ့အတွက် အရမ်းပဲ ဝမ်းသာမိပါတယ်” လို့ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးနည်းပြသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း၊ လူ့အခွင့်းအရေးနှင့် တာဝန်၊ ဝတ္တရားများသည် ချိန်ခွင်လျှာကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခွင့်အရေးသာမက တာဝန်၊ ဝတ္တရားများကိုလည်း လေးစားလိုက်နာစေလိုကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးနည်းပြသင်တန်းဆင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ မစုချစ်မှလည်း “ အခုလို သင်တန်းတတ် ခွင့် ရပြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်အနေနဲ့ သင်တန်းတတ်ခွင့်ရပြီဆိုပြီး ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာထက် သင်တန်းအပြီး မှာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငါ ဘာပြန်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို ပိုပြီးစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ သင်တန်း ပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့၊ နိုင်ငံအတွက်၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဒေသ အတွက် ကြိုးပမ်း လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ တစ်လှေထဲ စီးသူတွေအဖြစ် ပြန်လည်တွေ့မြင်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါ တယ်”လို့ နည်းပြ သင်တန်းသို့ တတ်ရောက်လာသူများအား တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ညီမျှခြင်း မြန်မာအဖွဲ့၏ ဦးအောင်ဇော်ထွေး (Senior Advocacy Trainer)မှလည်း လူ့အခွင့်အရေးနည်းပြသင်တန်း တတ်ရောက်လာ သူများအနေနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် သေသေချာချာ တတ်ကျွမ်းနားလည်အောင် ကြိုးစားစေလိုကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုအတွက် ရပ်တည်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သော သူများဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားစေလိုကြောင်း၊ ပြည်သူ့အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးလိုသည့်စိတ်ဓာတ်များ ထားရှိစေလိုကြောင်းများ တိုက်တွန်း ပြောကြားပေး ခဲ့သည်။
သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အစီအစဉ်များပြီးသည့်နောက်တွင် သင်ခန်းစာများကို စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သင်တန်း တွင် တတ်ရောက်လာသူ စုစုပေါင်း ၂၇ ဦးခန့်ရှိပြီး လျှောက်ထားသူ ၁၀၀ ကျော်အတွင်းမှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့၊ ရွှေဖြူဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ... See MoreSee Less
ပါပွီးထံမှ သင်ယူခြင်း ဇာတ်လမ်းတွဲကို အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့နှင့် သောကြာနေ့များတွင် ပြသခဲ့သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် ပဉ္စမပိုင်းထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပရိတ်သတ်များလည်း စိတ်ဝင်စားခဲ့လိမ့်မည်လို့ မျှော် လင့်ပါသည်။
လာမည့်အစီစဉ် “ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းခြင်း” ပဉ္စမပိုင်းတွင် ညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဆရာဦးအောင်မျိုးမင်းနှင့်အတူ နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေတို့မှ ကလေးများအား "ပဋိပက္ခဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်လျှင် မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်း ရမည်"ကို ကလေးများအား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးသည့်နည်းဖြင့် သင်ကြားပေးနေသော ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါသည်။
TDH-GER အထောက်အပံ့ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော ပါပွီး၊ နဂါးလေးနှင့် တစုံတရာ၏ စွန့်စားခန်းများ အမည်ရှိ စာအုပ်ကို “ကလေးငယ်များအား ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို သိရှိ စေရန်” ရည်ရွယ်ပြီး ဇာတ်လမ်း ပြောပြခြင်းနှင့် ကာတွန်းပုံ (motion movie) ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ပြီး ဇာတ်လမ်းပုံစံ ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
ညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်း၊ နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေနှင့် ကလေးငယ်များ(United ACT အဖွဲ့ သားများ)တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
ထုတ်လွှင့်မည့် သတင်းဌာန - DVB ရုပ်သံသတင်းဌာန
အချိန် - တနင်္လာနေ့ (နံနက် ၉ နာရီ - ၄၅ မိနစ်၊ ညနေ ၄ နာရီ - ၄၅ မိနစ်၊ ည ၁၁ နာရီ - ၃၀ မိနစ်) သောကြာနေ့ (မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ - ၁၅ မိနစ်၊ ၄ နာရီ - ၃၀ မိနစ်)
ယခင်ထုတ်လွှင့်ပြီးသွားသည့် အပိုင်းများကို ပြန်လည်စုစည်းပေးလိုက်ပါသည်။
ပါပွီးထံမှ သင်ယူခြင်း (ပထမပိုင်း)
ပါပွီး၊ နဂါးလေးနှင့် တစုံတရာ၏စွန့်စားခန်းများ (ဒုတိယပိုင်း)
http://equalitymyanmar.org/hre-tv-episode-112/ ... See MoreSee Less
ညီမျှခြင်း မြန်မာရုံးသို့ လာရောက်လေ့လာကြသော Plan International (Thailand)အဖွဲ့အား လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငူံ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများနှင့် စိမ်ခေါ်ချက်များကို ညီမျှခြင်း မြန်မာအဖွဲ့၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်းမှ ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ ... See MoreSee Less
Equality Myanmar shared ICCPR Myanmar Action Group's post. ... See MoreSee Less
ICCPR စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရေး လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော နိုင်ငံတကာလူ့အခွင်...
Archives Select Month February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011
Equality Myanmar အကြောင်း
“ညီမျှခြင်း-မြန်မာ” (ယခင်-လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန-(မြန်မာနိုင်ငံ) HREIB)” သည် အမြတ်အစွန်းအတွက် မရည်ရွယ်သည့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြေခံပြည်သူ လူထုများအတွက်ဦးတည်၍ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးခြင်း အစီအစဉ်များ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းအစီအစဉ်များနှင့် သုတေသနအစီအစဉ်များကို လုပ်ဆောင် နေလျက်ရှိသည်။
August 21, 20172အလုပ်သင်နည်းပြ လျောက်လွှာပုံစံခေါ်ယူခြင်း
January 11, 2017 1 လူ့အခွင့်အရေးပညာပေး နည်းပြသင်တန်း လျှောက်လွှာပုံစံခေါ်ယူခြင်း
March 18, 2015 1 Equality Myanmar ၏ အကောင်းဆုံး လူ့အခွင့်အရေး ဗီဒီယိုများကို ခံစားခြင်း